Two Members of Women of Zimbabwe Arise Group Missing - allAfrica.com
Two Members of Women of Zimbabwe Arise Group Missing
Two WOZA members of the nine who were arrested on the 2nd of July for conducting a "occupy and demand the draft constitution" campaign are reported missing.
Women protest in Zimbabwe
Zimbabwe: Two WOZA Women Arrested on 2 July, Cannot Be Found
Sokwanele, 3 July 2012
Nine Bulawayo WOZA members were arrested the night of 2nd July 2012 and are being held in custody at 3 different police stations. They were arrested in 2 separate incidents. This… Read more »
Zimbabwe: Nine WOZA Activists Arrested in Bulawayo
SW Radio, 3 July 2012
Nine activists from the Women of Zimbabwe Arise (WOZA) group were arrested in Bulawayo on Monday evening while conducting their "occupy and demand the draft constitution" campaign. Read more »
SW Radio, 25 June 2012
The parliament building was the site of a demonstration by members of the Women of Zimbabwe Arise (WOZA) pressure group, who were demanding the immediate release of a new… Read more »
Seven members of the pressure group Women of Zimbabwe Arise (WOZA) were arrested and then briefly detained on Tuesday, after a 'die-in' protest in Bulawayo. Read more »
Zimbabwe: Woza Members Assaulted At Peaceful Demo
SW Radio, 4 June 2012
Members of the pressure group Women of Zimbabwe Arise (WOZA) were assaulted during a peaceful demonstration over the weekend, which saw hundreds of people take to the streets in… Read more »